တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဖွဈသူ H.E. Mr. Wang Yi အားလကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဖွဈသူ H.E. Mr. Wang Yi အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး H.E. Mr. Qian Keming၊ လကျထောကျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Wu Jianghao၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Chen Hai နှငျ့ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Wang Yi အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Wang Yi အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Qian Keming၊ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wu Jianghao၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai နှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။